မြန်မာ အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေး မီးစိမ်းပြ - Myanmar Builders Guide
ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ရထားဖြင့် သွားလျှင် ၁၅ နာရီကြာသည်။ ဖြည်းဖြည်းသာ ခုတ်မောင်းသည်၊ ပူပြင်းပြီး ဖုန်ထူသေ
ာ ကျေးလက်မြေပြန့်ဒေသတစ်လျှောက် ခုတ်မောင်းသွားသည်။ အထက်တန်းတွဲ အတွက် ၁ ဒေါ်လာသာ ကုန်ကျသည်။
၎င်းခရီးကို မောင်းနှင်သော လေအေးပေးစက် ဘတ်စ်ကားများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ပိုရှိသော်လည်း ရထားသည် ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်စရာ ပိုကောင်းသောကြောင့် လူကြိုက်များသည်။
ဘူတာတိုင်းတွင် ခရီးသည်များကို ဈေးသည်တို့က ရေခဲရေပုလင်းများ၊ သစ်သီးများ၊ မုန့်များနှင့်ဟင်းလျာများကို ရောင်းချကြသည်။ ခရီးတစ်လျှောက် အချိန်အများကြီး ပိုနေသဖြင့် ဘေးဘီမှာ အတူလိုက်ပါသူများနှင့် စကားစမြီ ပြောဖြစ်ကြသည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဤသို့ဤပုံ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများစွာတွင် ရထားဖြင့် ခရီးသွားကြသည်။ ရထားလမ်းမှာ သံလမ်းနှစ်ခုကြား အကွာအဝေးအကျဉ်းစားဖြစ်သည့် ၁၀၀၀ မီလီမီတာ (၁ မီတာအကွာ) သည် ထုံးစံဖြစ်သည်။ ရထားလမ်းတို့မှာ ပစ္စည်းကိရိယာများ မပြည့်မစုံဖြစ်နေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ဆိုးဝါးသည်။
နေပြည်တော်တွင် အနားပေးထားသော ရထား
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံက ဒေသတွင်းမှာ ရထားလမ်းကွန်ရက်ကို တိုးချဲ့မည့် အလားအလာများ ရှိလာခဲ့သည်။ ထို ရထားသံလမ်းများသည် ကမ္ဘာ့စံ ဖြစ်သော သံလမ်းနှစ်ခုကား အကွာအဝေးစံအတိုင်းအတာ ၁၄၃၅ မီလီမီတာကို သုံးစွဲထားသည်။ ရထားကို ပိုမြန်မြန် ခုတ်မောင်းလို့ ရသည်။ ပိုကြီးမားသော ရထားတွဲများကို သုံးလို့ရသည်။
ကနဦး စီမံကိန်းတွင် တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ပြေးသည့် ရထားများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွမ်မင်းမြို့တော်နှင့် လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဗီယက်ကျန်းတို့ကို ဆက်သွယ်သည့် ရထားလမ်းဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံ နီးပါး ရှိသည်။ ၃၀% ကို လာအိုမှ ထည့်ဝင်သည်။ တရုတ်ပြည်၊ ဥရောပနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများတွင် ပြေးဆွဲနေသော မြန်နှုန်းမြင့် ရထားများကဲ့သို့သော ရထားများအတွက် ရထားလမ်းအသစ်များတည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးနေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ နှင့်အထက် အမြန်နှုန်း ရှိသော ရထားများ ဖြစ်သည်။
ရထားလမ်းသစ်များ ဖောက်ရခြင်းသည် ငွေနှင့် အချိန် များစွာ ကုန်ကျမှုရှိကြောင်း ဒေသတွင်း အစိုးရများ သိထားကြသော်လည်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးကြောင့် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ ပြိုလဲနေစဉ် ရထားဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးသည် ပိုလိုလားစရာ ဖြစ်နေသည်။
မြန်မာ့မီးရထား နေပြည်တော်တွင် ပြေးဆွဲ
သို့သော် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ခေတ်ဟောင်းပုံစံရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာ ရှိနေသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ အစိုးရ အတော်များများသည် ဥရောပကိုလိုနီလက်အောက်ရောက်စဉ် ခင်းခဲ့သော တစ်မီတာအကျယ် ရထားလမ်းဟောင်းများကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် စတင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထိုရထားလမ်းတို့သည် ဒေသအတွင်း နေရာအတော်များများကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ခေတ်မီ ရထားတွဲများနှင့် အချက်ပြစနစ်များနှင့်အတူ ယင်းရထားလမ်းများသည် တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ အထိ ပြေးနိုင်သည်။ သို့သော် လောလောဆယ်တွင် ရထားအနည်းငယ်သာ ထိုအမြန်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
“အရှေ့တောင်အာရှ ရထားလမ်းကွန်ရက်မှာ အမြဲတမ်းကြီးစိုးထားတာ မီတာအကျယ် ရထားလမ်းတွေပါ။ ရှိပြီးသား ရထားလမ်းတွေကို ပြန်အသက်သွင်းတာက မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်းကွန်ရက် တည်ဆောက်ရတာထက် ပိုလွယ်ကူပြီး ပိုသက်သာပါတယ်” ဟု ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Logistics and Transport Department at Thammasat University Business School မှ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Ruth Banomyong က ပြောသည်။
“မြန်နှုန်းမြင့်က ဈေးကြီးလွန်းတယ်။ ဘယ်သူမှ တရုတ်ကို မယုံဘူး။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ မြန်နှုန်းမြင့် လိုအပ်လို့လား” ဟု Ruth က ပြောသည်။
မြန်မာ့ မီးရထား (မမ)
ပြန်လည်မြှင့်တင်သည့် မီတာစံ ရထားလမ်းတစ်ခုမှာ ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားလမ်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရ အကူညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော JACA (Japan International Cooperation Agency)ချေးငွေ ယန်း ၂၆၃ ဘီလျံ ( ကန်ဒေါ်လာ ၂ . ၄ ဘီလျံ) ပါဝင်ပြီး မြန်မာအစိုးရမှ ယန်း ၅၇ သန်း ထည့်ဝင်သည်။
မြန်မာ့မီးရထားက ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက စီမံကိန်း ပထမအဆင့်ကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပြီး ရန်ကုန်-တောင်ငူ လမ်းပိုင်း ၂၆၀ ကီလိုမီတာကို အဆင့်မြှင့်တင်သည်။ တောင်ငူသည် ရန်ကုန် မြောက်ဘက် ၂၂၀ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိသောမြို့ ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းနှင့် အချက်ပြကိရိယာတို့ကို ဂျပန်ကန်ထရိုက်တာတို့က တပ်ဆင်ပေးသည်။ ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတုံးများ၊ တာရိုးအသစ်ဖို့ခြင်းများ ရထားလမ်းတစ်လျှောက် ပြုပြင် မွမ်းမံရန် လုပ်သားများကို မြန်မာ့မီးရထားမှ ပေးအပ်သည်။ အလုပ်သမားဂိုဏ်းများသည် ရထားဖြတ်သွားလျှင် မတ်တတ်ရပ်ရင်း လက်ဝှေ့ရမ်းပြကြသည်။
မြန်မာမီးရထား ရုံးချုပ် နေပြည်တော်
ရန်ကုန်-တောင်ငူ ရထားလမ်းပိုင်မွမ်းမံခြင်းသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးရမည် ဖြစ်သည်။ တောင်ငူကို ဖြတ်သန်းပြီး ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်သို့ ခုတ်မောင်းချိန်ကို ၁၂ နာရီ ကြာမြင့်သည်မှ ၄ နာရီခွဲဝန်းကျင်သို့ လျော့ကျမည် ဖြစ်သည်။
အဆင့် နှစ် ပြီးစီးသည့်အခါ ကီလိုမီတာ ၃၆၀ ရှိသည့် တောင်ငူ-မန္တလေး လမ်းပိုင်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးသည် ၈ နာရီ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၁၅ နာရီ ကြာသည်။ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တို့သည် ဤခရီးကို တစ်နာရီသာ ကြာသော်လည်း တစ်ကြောင်းခရီးစဉ်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ခန့် ကျသင့်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရထားသည် ခရီးစရိတ် သက်သာသည့် အားသာချက် ရှိသည်။ မွမ်းမံပြီးသော ရထားလမ်းဖြစ်သည့်ကြောင့် ရထားခ ထိုးတက်လျှင်တောင် သက်သာနေဦးမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ မီးရထား သည် လာမည့်နှစ်တွင် ၂၂၆ ကီလိုမီတာရှိသည့် ရန်ကုန်-ပြည် ရထားလမ်းကို မွမ်းမံရန် အစီအစဉ် ရှိသည်။ ယင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် သက်တမ်းအရင့်ကြာဆုံး ရထားလမ်း ဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရက ၁၈၇၇ ခုနှစ်တွင် ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။
ပြုပြင်မွမ်းမံမည့် စီမံကိန်းအတွက် ချေးငွေကို အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ရရှိသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်-မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်-ပြည် ရထားလမ်းနှစ်ခုစလုံးသည် တိုင်းပြည်ရှိ မီတာစံ ရထားလမ်းကွန်ရက် ၆ ၀၇၂ ကီလိုမီတာ၏ သေးငယ်သော အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ ထက်ဝက်ကျော်ကို စစ်တပ်ဦးဆောင်သော အစိုးရတို့က တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး သိပ်မကြာလှသေးချေ။
“၁၉၈၈ မတိုင်ခင်က ကျွန်တော်တို့မှာ ရထားလမ်း ၃ ၀၀၀ ကီလိုမီတာပဲ ရှိတယ်” ဟု မြန်မာ့မီးရထား နည်းပညာဆိုင်ရာဌာနမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးအောင်ဝင်းက ပြောသည်။ “နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရထားလမ်း ကွန်ရက်က နှစ်ဆ တိုးသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရထားလမ်းအသစ် အများစုက ရထား ဝန်ဆောင်မှုကို ကျကျနန မပေးနိုင်ဘူး။ စံနှုန်းက အတော်ညံ့တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြုပြင်မွမ်းမံနေသော ရန်ကုန်-တောင်ငူ ရထားလမ်းပိုင်းအတွက် ကွန်ကရိ ဇလီဖားတုံးများ
ရထားလမ်း အများအပြားတို့သည် စီးပွားရေးအရ ပြေးဆွဲပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ချေ။ သို့သော် ကွန်ရက်တွင် စွန့်စားခရီး သွားလိုကြသော ခရီးသွားများအတွက် ဝေးလံခေါင်သီသော လမ်းကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အလားအလာကောင်းများ ကြီးမားသည်ဟု အစိုးရက ရှုမြင်သည်။
ယင်းတို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Khiri Travel ၏ မြန်မာပြည် ရုံးခွဲတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ Edein Briels ၏ အဆိုအရ ရှုခင်းကောင်းသော ရှမ်းပြည်နယ် သီပေါမှ တောင်ပေါ် အပန်းဖြေမြို့ဖြစ်သော ပြင်ဦးလွင်သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ရထားလမ်း၊ သာစည်မှ တောအုပ်ကို ဖြတ်ပြီး ရှမ်းပြည်နည်ရှိ ရွှေညောင်၊ ကိုလိုနီခေတ် အပန်းဖြေမြို့ဖြစ်သော ကလောမှ ဟဲဟိုးသို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းပိုင်းများ ပါဝင်သည်။
အိမ်နီးနားချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် SRT (State Railway of Thailand) သည် စုစုပေါင်း အရှုံး ဘတ် ဘီလျံ ၁၀၀ ( ကန်ဒေါ်လာ ၃ .၁ ဘီလျံ) ကျော် ရှိသည်။ အလားတူ မီတာစံ ရထားလမ်းကွန်ရက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေပြီး ၄၀၀၀ ကီလိုမီတာ ရှိသည့် ကွန်ရက်တွင် အများစုမှာ တစ်လမ်းသာ ရထားလမ်း ဖောက်ထားသည်။ အစိုးရက ပြုပြင်မွမ်းမံရေး အစီအစဉ်ကို အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင် နေသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် SRT သည် ကန်ထရိုက် ခုနှစ်ခု အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံ ရှိသည်။ ရထားလမ်း ၉၃၃ ကီလိုမီတာအတွက် ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ဘန်ကောက်မှ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ အတွင်းမှာ ဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့တွင် တိုးချဲ့နေသော MRT ( mass rail transit system) နှင့် ချိတ်ဆက်သော ရထားဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး အလုပ်တက်ဆင်း စီးကြရန် ဖြစ်သည်။ SRT က လျှပ်စစ်ရထားလမ်းအတွက် အစီအစဉ် ရှိသည်။ ဉရောပစံ အချက်ပြစနစ်အသစ်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး မြန်နှုန်းများသည့် ရထားများအတွက် ဘေးကင်းသော စံကို မြှင့်တင်ပေးထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်ရှိ Saraburi မှ နှစ်လမ်းသွား မိုးပျံရထားလမ်း
SRT သည် ဆယ်စုနှစ် လေးခုကြာ ဝင်ငွေကျဆင်းနေခဲ့ပြီး ယခုအခါ နှစ်လမ်းသွား ရထားလမ်းကို အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ “ဒီဟာ မတိုင်ခင်က ကျွန်တော်တို့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ဖို့ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှစ်လမ်းသွား မရှိလို့ပါ” ဟု SRT Deputy Gov. Voravuth Mala က ပြောသည်။ “ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေနေရာ ဟွာဟင်း နှစ်လမ်းသွားကို ဉပမာ အဖြစ် ပြောရရင် လာမယ့်နှစ်မှာ ပြီးမယ်။ ဒီတော့ ဘန်ကောက်ကနေ ဟွာဟင်းကို သုံးနာရီ ထက် နည်းပြီး ရောက်သွားမယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဈေးကွက်အသစ်ပဲ” ရထားနှင့် လေယာဉ်ပျံတို့အကြား ပြန်နိုးထလာသော ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း Korat- Khon Kaen နှစ်လမ်းသွား ရထားလမ်း
“ဟိုအရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ညရထားတွေ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ်ခ သက်သာတဲ့ လေကြောင်းတွေ သတ်တာ ခံရတယ်” ဈေးကွက် အပိုင်းအကန့်တစ်ခုတွင် ပိုမြန်သည့် ရထားသည် လေယာဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် အားသာချက် ရှိသည်။ “ရှေးကျတဲ့သူတွေက ရထားနဲ့ ခရီးသွားရတာကို ကြိုက်တယ်။ သူတို့က မနက် ၅ နာရီ လေယာဉ်ကွင်း ဆင်းရတာကို မလိုလားဘူး”
COVID-19 ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှ စီးပွားရေးများ ရေရှည်ထိခိုက်စေပေရာ စီးပွားရေး ကြီးထွားနှုန်း လျော့ကျမည် ဖြစ်ပြီး စရိတ်သက်သာသော ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက် ကြီးမားလာလိမ့်မည်။ လူထုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ရထားတွေကို အားဖြည့်တင်းကြရတာ လာနေပါပြီဟု Ruth က ပြောသည်။
မီတာစံ ရထားလမ်းများသည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတွင်လည်း ကြီးမားသော အလားအလာ ရှိသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် Royal Railway သည် ဖနွမ်ပင်မှ သီဟာနုဗင် ရထားလမ်းပိုင်း ၂၅၆ ကီလိုမီတာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြေးဆွဲသည်။ အဓိကအားဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပြီး မဲခေါင်မြစ်ရှိ မြို့တော် ဆိပ်ကမ်းအတွက် ဖြစ်သည်။
ကုန်းလမ်းမှာ အခြားပို့ဆောင်ရေး ပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး နှုန်းထားသည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၈% သက်သာသွားသည်။
ဖနွမ်ပင်နှင့် ပွိုင့်ပက် ၃၈၅ ကီလိုမီတာ ရထားလမ်းသည် ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပြီး ၄၅ နှစ်ကြာ ရပ်နားထားခဲ့ပြီးမှ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။
မီတာစံ မီးရထားလမ်းများသည် အရှေ့တောင် အာရှတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွား နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲသားများအတွက် ဈေးသက်သာသဖြင့် အားထားရာ ဖြစ်သည်။ ရထားသည် ထရပ်ကားများ၊ လေယာဉ်များထက် လေထုညစ်ညမ်းမှု ပိုနည်းသည်။
ထိုထိုသော အကြောင်းများ အားလုံးကြောင့် ဆက်လက်မွမ်းမံရန် အလားအလာသည် ဆက်လက် အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ “ အခုကနေ နောက် ဆယ်နှစ်ကြာပြီးချိန်မှာ ဒေသတွင်း ရထားလမ်းတွေ ပိုကောင်းနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲတာက နှေးလွန်းနေတော့ လူတွေ သတိမပြုမိကြဘူး” ဟု Ruth က ပြောသည်။
Read 27726 times	Last modified on Saturday, 27 June 2020 14:05